Ungawakha Kanjani amavidiyo we-TikTok ahlukile - uLucidPix
Silandele ku-TikTok @LucidPix
Uma ungakaze uzwe, i-TikTok isiphenduke isidumo sakamuva semithombo yezokuxhumana sika-2020. Uhlelo lokusebenza lwadalwa ekuqaleni ukwenza amavidiyo amafushane wesibili kuya kwayi-15 abantu abadansa nabathengisa izindebe emculweni, noma kunjalo manje selungene ezinhlakeni ezahlukene okunye okuqukethwe kusuka wenza ikhofi eshayiwe kuya ku Abasebenzi be-Starbucks balandisa ukusebenzisana kwamakhasimende kwabo "abathandayo". Kulesi sikhala sebhulogi, sizokunikeza ugqozi lwevidiyo yakho elandelayo ye-TikTok futhi sikukhombise ukuthi sikwenze kanjani.
Usebenzisa iLucidPix yeTikTok
Ukwenza ividiyo yeTikTok ehamba phambili kudinga ukungeza okuthile okuhlukile futhi mhlawumbe okungakenziwa. Ngakho-ke, indlela ephumelela kakhulu yokwenza okuqukethwe kwakho kugqame ukungenisa izinhlelo zokusebenza zangaphandle ekuhlelweni kwakho kwevidiyo. Enye indlela yokwenza lokhu ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuguqulwa kwesithombe se-3D, iLucidPix. Ngokuguqula izithombe zakho zisuse izithombe ezi-2D zibe ngamavidiyo we-3D noma ama-GIFs, okuthunyelwe kwakho kuqinisekisiwe ukuthi kunikezwe ukuthi i-3D Photography ayikaqali ukwenza iTikTok. Ngamafuphi, okuthunyelwe kwakho kuzobonakala ngoba kwehlukile. Nakhu ukuthi ungasenza kanjani isithombe se-3D eLucidPix.
Khetha Isihloko Esithrendayo
Ngesikhathi sokusebenza kwengqondo, kungaba nzima ukucabanga ngemibono emisha lapho sekuvele kunokuqukethwe okuningi endaweni yesikhulumi. Ngakho-ke, siphakamisa ukuthi ubheke izihloko ezihamba phambili futhi uzishintshe kancane ukuze zihlukile kuwe. Lokhu kungasukela ekwakheni amavidiyo okupheka ngezithombe ze-3D kusetshenziswa iLucidPix noma ukudala ifreyimu ye-3D eyenziwe ngokwezifiso ukufaka ividiyo yakho ye-TikTok.
Uzame umkhuba we- #mirrorselfie kusuka ku- #tiktok? Nangu u-@leoniehanne ukukwenza ku-3D nge #LucidPix
Okuthunyelwe okwabiwe ngu I-LucidPix - i-3D Photo App (@ lucidpix3d) kuqhubeke Ngo-Apr 29, i-2020 ku-6: 16pm PDT
Lapha sithathe inkambiso yokukhombisa imikhangiso yakho yezokuvakasha futhi esikhundleni sokusebenzisa amavidiyo asobala, sisebenzise uLucidPix ukuguqula izithombe zethu zibe amavidiyo we-3D, okwenza okuthunyelwe kuhluke kunoma yini enye epulatifomu!
Ufuna ukuya kuphi ngemuva kokuvalelwa yedwa? #lucidpix # 3d # 3dphoto # 3dphotography # 3dphotos #travel #tiktoktravel #plane #wanderlust #ukuqinisekisa
Apart Ukuhlukaniswa Kwamanje - ODESZA
Okokugcina, indlela enhle yokwenza amavidiyo we-TikTok ahilelekile ukuzijabulisa ngawo! Ukuthi ngabe nguwe wedwa, ngabangane bakho noma umndeni, amavidiyo amahle kakhulu weTikTok yiwona ajabulele ukwenza kakhulu. Uma lokhu kungasebenzi kuwe bese uzama okuthile okusha, ungadabula TikTok ukuthola ukudansa okusuka kwabaqalayo kuya kweleveli yobungcweti UCharli D'Amelio choreography. Noma ngubani othola ugqozi lwakho, ulusebenzise futhi alwenze lube olwakho!
Ungasakha Kanjani isithombe se-3D ngombhalo →← Bored in the House? Nazi izinto ezinhlanu okufanele uzenze Ngesikhathi sokuhlukaniswa